पढाइको प्रवर्धनको लागि राष्ट्रिय योजना। कसरी र कहिले। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, हाम्रो बारेमा
हामी पढ्न लाग्दैन
सरकारले यसको संस्कृति मन्त्रालय मार्फत एक पढाइलाई बढावा दिन राष्ट्रिय योजना समावेश एक सामान्य मा, २०२० सांस्कृतिक कार्य योजना। मैले हिजो पढें प्रकाशकहरुको संघ (FGEE), रिपोर्ट तैयार गर्ने प्रभारी स्पेन २०१ Read मा पढ्दै, एक चेतावनी दिन्छ कि हामी यहाँ पठन स्तर बढाउन असमर्थ छौं।
तथ्या st्क आश्चर्यजनक छन्: लगभग एक 40% नागरिकको पढ्न सकेन मा पुस्तक छैन 2015। २०१ 2016 मा कति जना पुगे होलान? तर अहिलेको लागि, यो त्यस्तै हो एउटा प्रस्ताव, एक इरादा। यो कहिले वा कसरी निर्दिष्ट गर्दैन यो त्यो योजना हुनेछ। हामी दृश्यको समीक्षा गर्दछौं।
1 कसरी पढ्न प्रोत्साहित गर्ने
2 हामी किन पढ्दैनौं
कसरी पढ्न प्रोत्साहित गर्ने
प्रतिबद्धता संस्कृति राज्य सचिव, Mister फर्नान्डो बेन्जो, कि सरकारी परियोजनाहरु वृद्धि गर्नुहोस् त्यो गरीब प्रतिशत पाठकहरूको घर। यो योजना अधिक सामान्य २०२० सांस्कृतिक कार्यको योजनाको हिस्सा बन्ने छ, जसमा भाग पढ्नको लागि समर्पित। थप रूपमा, तिनीहरू यो पहलमा सामेल छन् भन्ने कुरा आशा गर्छन् प्रकाशन क्षेत्र र स्वायत्त समुदायहरू। तर सबै भन्दा माथि यो समावेश गर्न चाहन्छ सबै समाज। कसरी?
सबै भन्दा पहिले उनीहरू चाहन्छन् कि स्कूलहरूमा पढ्ने समय शारीरिक शिक्षा समयको साथ बराबर हुन्छ र स्पोर्टी अर्को शब्दहरुमा, केहि पुश अप, एक अध्याय, क्यारियर, अर्को अध्याय, बास्केटबल खेल, कम्तिमा आधा पुस्तक। केहि भन्दा केही राम्रो छ। मलाई लाग्छ म मेरो युवा काल देखि सम्झना छ कि म दुवै को लागी समय थियो।
दोस्रो, पढ्ने बनाउनुहोस् transversal गतिविधि "सबै विषयहरूमा" सामेल यस्तो देखिन्छ कि अहिले सम्म यो इतिहास वा भाषा वा विज्ञान वा भौतिकी वा साहित्य अध्ययन गर्न पढिएको थिएन। जे भए पनि, तपाईले पढ्न पढ्नु भएन।
तेस्रो, तपाइँ चाहानुहुन्छ युवाहरू विशेष मा विचार अर्को चंचल गतिविधि को रूपमा पढ्दै। हे आफ्नै भाषा विकास गर्न र पढ्नुहोस् रचनात्मक। तर कसरी प्राप्त गर्ने व्हाट्सएप र डेरिभेटिभको प्रतिस्पर्धा र १ 140० क्यारेक्टरहरूमा पढाइको पूर्ण कटौतीको बीचमा? कुनै शंका बिना कठिन कम्पनी।
र अन्तमा, यो चाहिन्छ त्यो "पाठ्यक्रमबाट" रीडर रिवाउन्ड प्राप्त गर्नुहोस्। हो, श्री बेन्जोको राम्रो इच्छा छ, तर समुद्री डाकूहरूले जहिले पनि राम्रोसँग तामालाई हराउनु पर्छ। र त्यहाँ तिनीहरू ठीक स्पिन हुनेछ।
हामी किन पढ्दैनौं
अति धेरै बहाना कि म पहिले देखि नै केहि टिप्पणी गरीरहेको छु। तर कारणहरू ... त्यो निर्दिष्ट गर्न पहिले नै गाह्रो छ।
प्रकाशक समाज संघको रिपोर्टमा, स्पेन २०१ Read मा पढ्दै, बाहिर खडा किताब पसल र प्रेस बिक्री केन्द्रहरू बन्द। यो ज्यादै दु: खी छ, उदाहरणका लागि, म्याड्रिडको प्याडलकमा र गएको ग्रीष्मकालिन प्याडलॉक र न्यूभोस मिनिस्टियोजमा Fnac शाखा हराइरहेको। सधैं विरलै आबादी र यसको वरपरको महत्त्वपूर्ण र विविध वाणिज्यिक क्षेत्रको लागि धेरै प्रतिस्पर्धाको साथ।
यसले जनसंख्याको %०% को चिसो डेटा पनि दिन्छ जुन पढ्नमा कुनै रुचि छैन, साथै बुढ्यौली कोष पुस्तकालयहरूको सार्वजनिक सायद यो पनि हो कि केहि धेरै सानो छन् र पुरानो कोष छ कि तिनीहरूले नवीकरण गर्न सक्दैनन्। मेरो लागि, जो समय-समयमा म चन्दा दिन्छु, तिनीहरू जहिले पनि मसँग कुरा गर्छन्। उनीहरूको कुनै ठाउँ छैन। तर ती चीजहरू सँधै राख्छन् जुन म तिनीहरूलाई लेराउँछु।
कि त्यहाँ छन्। किनभने सचिवले पनि जोड दिए कि पढाइ हो दोस्रो मनपर्ने सांस्कृतिक गतिविधि स्प्यानिश को, संगीत सुने पछि। र त्यो कलको प्रतिशत बारम्बार पाठक (हप्तामा कम्तिमा एक पटक पढ्नुहोस्) पछिल्लो वर्षहरूमा बढेको छ 47% स्टाफ को। दिनको कम्तिमा एक पटक पढ्ने हामी आफैले आफूलाई के भन्छौं? वा हामीहरू ती जो जीवनमा खेलिरहेका छौ र प्रायः स्नेहपूर्वक पढ्छौं?
खैर, प्रश्न हुनेछ यस पठन असमानता बढ्नबाट रोक्नुहोस् धेरै समर्पित र पूर्ण विच्छेदको बीच। क) हो, सम्पादकहरू उदाहरण को लागी तिनीहरूले अनुरोध केहि सटीक मापन: E-book मा VAT कटौती, अब २१% मा, कागजातको of% कामहरू;aचोरीको विरूद्ध कडा लडाई;aपुस्तक पसलहरूको लागि सहयोग योजना, विशेष गरी सानाको लागि, र अधिक ठूलो पुस्तकालयहरूको लागि।
के हामी त्यो योजना देख्नेछौं? र यसले काम गर्दछ? आशा गरौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » हाम्रो बारेमा » पढाइको प्रवर्धनको लागि राष्ट्रिय योजना। कसरी र कहिले।
एक साहित्यिक प्रतिस्पर्धा पेश गर्न सुझावहरू